News Collection: प्रचण्ड निवासमा त्यसदिन के–के पाक्यो?
प्रचण्ड निवासमा त्यसदिन के–के पाक्यो?
काठमाडौं। बाहिर त सूचना चुहिएन तर, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल अफ्रिका उड्नुअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसित नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे गोप्य कुराकानी भएको रहेछ। त्यस्तै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पनि त्यही दिन गोप्य संवाद भएछ। यी संवादले भावी राजनीतिमा नयाँ धु्रवीकरणलाई संकेत गरेको छ। किनभने खनालले त्यसदिन पौडेललाई भनेका रहेछन्, 'माओवादीसित तपार्इं कुरा मिलाउनोस्, साथ दिने काम हामी गर्छां।' उता प्रचण्डले पनि आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने संकेत रामचन्द्र पौडेललाई दिएपछि पौडेल थप उत्साही देखिएका रहेछन्।
झलनाथ खनाल अफ्रिका जाने दिन एकाबिहानै प्रचण्डनिवास नयााबजारमा रामचन्द्र पौडेल पुगेका थिए। पौडेल कुराकानी सकेर फर्केको केहीबेरमै झलनाथ र भरतमोहन अधिकारी नयााबजार छिरे। त्यसपछि फेरि खनाल र कांग्रेस नेता पौडेलबीच अर्काे वार्तालाप भयो।
'तपार्इंहरू र एमाले मिलेर सरकार बनाउनोस्, हामी विपक्षीमै बस्छौं। म भलनाथ खनाललाई पनि यही भन्छु,' प्रचण्डले नयााबजारमा रामचन्द्र पौडेललाई यस्तो वचन दिएका थिए। एकातिर झलनाथले रामचन्द्रलाई माओवादीसित कुरा मिलाउनोस्, एमालेले समर्थन गर्छ भन्नु र अर्काेतिर प्रचण्डले एमाले(कांग्रेस मिलेर सरकार बनाओ, हामी विपक्षीमै बस्छु भन्नुले माओवादी सरकारको दाबीबाट एक कदम पछि हटेको संकेत मिल्छ। यसैबीच, संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि माओवादी र कांग्रेसबीच सहकार्यको भित्री प्रयास पनि सुरु हुन थालेको छ। तर, के अब रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्रीत्व सम्भव होला? तत्काल यो त्यति सहजचाहिँ देखिादैन।
प्रचण्डसित भेटेर फर्केका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार, माधवकुमार नेपालले घिसार्दै लगेर जेठ १४ सम्म पुर्याोए भने त्यसपछि के होला भन्ने प्रचण्डलाई चिन्ता पलाएको छ। त्यसैगरी, शान्तिप्रक्रिया पूरा नभई अनमिन फर्कियो भने त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने संकटकाबारे पनि प्रचण्ड त्रसित देखिएको स्रोत बताउाछ।
सरकारको दाबीबाट माओवादी पार्टी एकाएक पछि हट्नासाथ विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि कांग्रेस, माओवादीबीच सहकार्य हुने सम्भावना देखिए पनि निश्चित विषय नतोकी विशेष अधिवेशन बोलाउन नमिल्ने भएकाले बैठक बोलाउनुपूर्व नै माओवादी र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको टुंगो लगाउनैपर्ने हुन्छ। विषय नतोकीकन न अधिवेशन बस्न सक्छ, न त विषयमाथिको छलफल सकिएपछि नै हाउस जारी रहन सक्छ। विशेष अधिवेशन डाक्नेले नै हाउसलाई बिजनेस दिनुपर्ने हुन्छ र यस्तो अधिवेशनमा ठोस विषयमाथिको छलफलमा निकास ननिस्किए पनि हाउस स्वतः अन्त्य हुन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार, एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएपछि शीतलनिवासले अधिवेशन बोलाउन बाध्य हुने भएता पनि यस्तो वैठकमा नियमित विषय प्रस्तुत नहुने र संसद्ले बाध्यकारी नहुने सामान्य निर्देशन मात्रै दिन सक्छ। सडकबाट समाधान खोज्ने माओवादीले सदनबाट समाधान खोज्नु सकारात्मक भए पनि विशेष अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीलाई चााडो संसद् अधिवेशन डाक्नका लागि आह्वानसम्म गर्नसक्ने तर्क कानुनविद्को छ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय बैठक आगामी २८ गते बस्दै छ। के यो बैठकले विगतको चट्टानी निर्णयबाट पछि हटेर कांग्रेस(एमाले नेतृत्वको बहुमतीय सरकारमा जाने निर्णय लेला? अनि उसैदिनबाट सुरु हुने माओवादीको केन्द्रीय बैठकले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वलाई समर्थन दिने निर्णय गर्ला? यो कुराको अहिल्यै छिनोफानो गर्न मुस्किल छ। अरूको नेतृत्व मान्दैनौँ भन्दै आएको माओवादी र राष्ट्रिय सरकारको नारामा फलामे निर्णय गरेको भनी तटस्थ बस्दै आएको एमालेले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरालाई समर्थन गर्नु भनेको दुवै दलहरू आफ्नो मान्यताबाट 'यु टर्न' हुनु नै हो।
संसद् बोलाउनेबारे नेपाली कांग्रेसभित्रै मतैक्य छैन। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा हाउस बोलाउनुपर्छ भनेर मनमोहन भट्टराईले भन्नासाथ मीनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खााड, प्रकाशशरण महत र सुजाता कोइरालाले जुरुक्क उठेर 'हुादैन, पहिले सहमति नगरी हुन्न' भन्ने तर्क गरेका थिए। यो घटनाले पनि अधिवेशन बोलाउने कुरामा कांग्रेसमा एकमत छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ। यस्तो स्थितिले मुलुकलाई नयाा धु्रवीरकणतर्फ लैजाने र नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक संकट बढ्ने अनुमान पनि एकथरी राजनीतिक विश्लेषकको छ। हाउस बोलाएपछि बाध्यकारी भएर सहमति बन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको सोचाइ पनि प्रत्युत्पादक बन्नसक्ने केही एमाले नेताको तर्क छ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि थप जटिलतामा फसेको प्रम निर्वाचन प्रक्रियाबारे सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि ठोस निर्णय दिन सकेका छैनन्। उनले यो प्रक्रियाको अन्त्य भयो भन्न सकेका छैनन् र रामचन्द्रको उम्मेदवारी जीवित छ भन्न पनि सकेका छैनन्। यस्तो बेलामा झलनाथले बहुमतीयमा जान्छु र प्रचण्डले रामचन्द्रलाई मान्छु नभनेसम्म नयाा प्रधानमन्त्री आउन मुस्किल छ। कथंकाल यस्तो प्रक्रियामा जाादा यो अदालती विषय बनिदिने अर्काे खतरा पनि छ। कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने विवाद चर्कियो र त्यसले कानुनी प्रश्न उब्जियो भने के होला? कसैले सामान्य विरोध मात्र गरे पनि संसद् स्थगन भएको घोषणा गर्ने सभामुखको बानी छ।
पछिल्लो समय माओवादीले आत्मसमीक्षा गर्दै विगतको हठ त्याग्न खोजेजस्तो देखिए पनि प्रत्येकपटक गल्ती गर्ने र घाटामा सम्झौता गर्ने काम हुादै आएको छ। ०४६ सालमा एमाले नेता मदन भण्डारीले खुला प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा रूपान्तरणका निम्ति आफैं जश वा अपजश लिनेगरी आएका थिए। तर, माओवादीले चाहिँ सुरुमा सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र पछि बाध्यात्मक घटनाबाट मात्रै निर्देशित हुने गरेकाले संक्रमणकाल थप लामो र जटिल बनेको दाबी गर्नेहरू पनि छन्। अस्थायी शिविरमा माओवादीले अयोग्य लडाकुलाई लामो समयसम्म राखे, अन्तिममा युएनले बाल सैन्यको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उठाउाछौँ भनेपछि मात्रै उनीहरूले तिनलाई घर पठाउन सहमति जनाए। उता पालुङटारमा लडाकुलाई सहभागी गराएको गल्तीलाई सच्याउन सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयमा बालानन्दलाई समर्थन जनाइयो। त्यसैगरी, भारतलाई प्रधानशत्रु मान्नेबारे पार्टीभित्र फोरम चलाउने चर्चा चलिरहेकै वेला भारतले पैसा दिएको सूचना चुहाएपछि प्रधानशत्रुबारे टुंगो छैन भन्ने तहमा प्रचण्ड ओर्लिएको बताइन्छ।
फराकिलो निर्णय लिन नसक्ने एवं खरो वैचारिक नेता नहुनाका कारण प्रचण्डले आफूलाई कहिले वैद्यतिर त कहिले भट्टराईतिर नजिक बनाउने गरेको स्थिति छ। कार्यकर्तामा जाादा वैद्यतिर नजिक तथा बुद्धिजीवी र विदेशीकहाा जाादा बाबुरामतिर नजिक देखाउने काम प्रचण्डबाट हुने गरेको छ। सेना समायोजनकै विषयमा अरूले ३ हजार भन्ने र प्रचण्डले ५ हजार भन्ने गरिएको छ। अहिले आएर माओवादीले फेरि ७ हजार भन्न थालेको छ। भोलि जनविद्रोहका लागि चाहिन्छ भनेर उसले एकतर्फी शिविर खाली गरी उनीहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउने ुबोल्डु निर्णय गर्ने हो कि भन्ने पनि कतिपयको आशंका छ। तर, सेना समायोजनबारे अस्पष्ट भए पनि राजनीतिक रूपमा भने प्रचण्डले 'कि विपक्षी दलको नेता, कि प्रधानमन्त्री' भन्ने पोजिसन स्पष्ट गरेको स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि, प्रचण्डको जतिसुकै आलोचना गरे पनि उनी जनयुद्धमार्फत राज्यलाई हाराबारा खेलाएरै नेता बनेका सक्षम व्यक्ति पनि हुन्। द्वन्द्वबाट आएको शक्तिलाई फेरि युद्धमा फर्किएर जाादैन भन्ने तर्कका आधारमा पेलपाल गर्न पनि मुस्किल छ। हिजो जनयुद्धमा छाती नापेर, कक्षा टपेर, मेडिकल सर्टिफिकेट भिरेर र उमेर हेरेर लडाकु सहभागी भएका होइनन्, विशेष परिस्थिति र संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्न २/४ हजारलाई समायोजन गर्नुको साटो अत्तो थापेर अल्मल्याउादा राष्ट्रलाई कति फाइदा वा नोक्सान होला भन्नेतर्फ पनि राज्यले गम्भीर बन्नैपर्छ। रिम, कम्पोसासित जुधेर आएको, भारत र चीनलाई समेत चक्मा दिनसक्ने यो शक्ति शान्तिप्रक्रियामा आउाछ भने त्यसलाई राज्यले सहज रूपमा लिनुपर्छ भन्ने विचार पनि देशमा उत्तिकै सवल रूपमा रहेको छ। हिजो यिनै प्रचण्डले भारतलाई पनि चक्मा दिएकै हुन्, राजालाई त परास्त नै गरेका हुन्। त्यसैले प्रचण्ड र उनको पार्टीलाई कमजोर ठानेर खेलाइराख्ने विचारले पनि शान्तिप्रक्रिया र सिंगो मुलुकलाई नै घाटा लगाउाछ भन्ने कुरातर्फ पनि राज्यपक्षले सोच्न आवश्यक देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार, दोस्रो चरणमा गोकर्णमा भएको छलफलमा प्रचण्डले हाम्रा लडाकु विशेष समितिको मातहतमा आऊन्, संयोजक बालानन्द तपाईंहरूले भनेकै व्यक्ति बनून्, म एक सातामा डिप्लोम्याटिक मिसनका प्रमुखहरूका बीचमा घोषणा गर्छु, डेढ महिनामा सेना समायोजनको प्रक्रिया टुंगो लगाऔं भनेको बताइन्छ। त्यसैगरी, सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी विवादलाई प्रशासनिक कार्यदल बनाएर टुंग्याउने अनि वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना विघटन गर्नेमा पनि माओवादीले त्यहाा सहमति जनाएको थियो।
यता, माओवादीइतर राजनीतिक शक्तिले भने अनमिन फर्केपछि माओवादीलाई थप मनोवैज्ञानिक दबाब दिन सकिने र ऊ थप सम्झौतामा आउने अनुमान गर्न थालेको छ। उनीहरू जंगल फर्किन नसक्ने र कन्टेनरमा रहेका हतियार पनि खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका कारण त्यसले दबाब पुग्न नसक्ने अड्कल राज्यपक्षको रहेको छ। तर, बाध्यता के छ भने माओवादीले जसरी जंगल जाने निर्णय गर्ने सक्दैन, त्यसैगरी सरकारले पनि शान्तिप्रक्रियालाई तोड्ने निर्णय लिनसक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थामा फेरि पनि अहिलेकै प्रक्रियामा झुलिरहन सरकार र माओवादी दुबै पक्ष बाध्य हुनेछन्।